I-IMC Kalium Ihlobanisa ne-Ellicott® Bucketwheel Dredge -Ellicott Dredges
I-IMC Kalium Ithembela e-Ellicott® Bucketwheel Dredge eMayini Ephansi Yezindleko Phosphate Imayini
Source: Ukukhishwa Kwe-IMC Global Press
Ngomthamo wonyaka wamathani amafushane angaphezu kwezigidi eziyishumi, IMC Kalium uphakathi kwabakhiqizi be-potash abahamba phambili nababiza kakhulu emhlabeni. Ngokuthengiswa okuphelele kwe-1997 kanye nemikhawulo ephelele yamaRandi ayizigidi ezingama-617.4 kanye namaRandi ayizigidi ezingama-237.7, ngokulandelana, uphiko lwebhizinisi lumele u-14% womthamo womhlaba.
Imikhiqizo ye-potash ye-IMC Kalium yathengiswa emazweni angaphezu kwama-20 ngonyaka ka-1997. IChina yiyona eyayiyikhasimende elikhulu kunawo wonke elithumela emazweni angaphandle, kanti ukuthengiswa kwasolwandle kwaba ngu-18% wokuthunyelwa kweKalium phakathi nonyaka. Ukuthunyelwa kwezolimo zase-US nabasebenzisi bezimboni kufinyelele kuma-55% no-13%, ngokulandelana. Ukusetshenziswa kwezolimo nezimboni zaseCanada kube ne-4% yokuthunyelwa okuphelele.
I-IMC Kalium isebenza ezimayini ezinhlanu eCanada kanti ezimayini ezintathu e-US IMC Kalium ichaza isisombululo sayo njenge-Belle Plaine, eSaskatchewan Canada. Ikhiqiza ubumsulwa obuphezulu be-potate emhlophe ye-potash ikakhulukazi ezimakethe zezimboni.
Ukuthola kabusha i-potash, imayini yeBelle Plaine isebenzisa i-Ellicott® I-B-490 dedgewheel dredge esebenza ngogesi esebenza ngokuthembekile iminyaka.
I-IMC Kaliumthruse ukusetshenziswa kwamakhompiyutha alawulwa ngamakhompiyutha kanye namasu wokukhipha amakristalu.
Ngaleso sikhathi, isixazululo sifakwa epayipini lokupholisa le-130-acre lapho okwengezwa khona amakristali futhi umkhiqizo owumphumela uyatholakala kabusha nge-Ellicott® ukugoba okuntantayo. I-potash ekhanyisiwe inamanzi, yomisiwe futhi ikalwa.
Umkhiqizo - I-IMC Kalium yenza imikhiqizo eminingi ehlukahlukene ye-potash, eminye yayo ngenqubo enelungelo lobunikazi. Konke kuqala ngokuchoboza i-ore evele ibe zinhlayiya ngazinye ze-potash nosawoti ngayinye engaphansi kwe-3 / 8 intshi. I-ore echotshoziwe ihlanganiswa ne-brine, isisombululo esinosawoti, bese idonswa ezikrinini ze-10-mesh, ezingaba ngosayizi bezikrini zasendlini. Izinhlayiya ezinkulu eziphambukiswe yisikrini ziya ku-Hard Media. Izinhlayiya ezincane ziyehla futhi ziye kuFlotation. Esimweni segumbi lekhompiyutha elilawulwa ngekhompiyutha eliphakathi nendawo, ukuguquguquka kokushintshashintshashintshi ekusetshenzisweni komhlaba kuhlala kugadwe njalo ukuqinisekisa imikhiqizo esezingeni.
IMedia Media - Kule nqubo, izinhlayiya ezinkulu ezikhethiwe ezingabekwanga ze-potash nosawoti zihlanganiswa ne-brine ne-magnetite. Ukudonswa okuqondile kwalesi sixazululo esindayo semidiya kungukuthi i-potash izothantazela phezulu futhi usawoti nokungcola kuzowela phansi. I-potash elintantayo, noma izinhlayiya zobukhulu obuhlanganayo, ziyagezwa, zithweswe isikhumba bese zomile. Ezinye izinhlayiya, ezibizwa ngokuthi ama-middlings, azihlukaniswa enqubweni yemidiya esindayo. Bacindezelwa kabusha, bahlolwe, futhi baqondiswa kumafulethi.
I-Flotation - Okokuqala, izinto ezingancibilikisi ne-brine ziyasuswa kulezi zinhlayiya ezincane ze-ore kwinqubo ebizwa ngokuthi yi-desliming. Okulandelayo, i-ore inezinhlaka zamakhemikhali ezihlanganisa izinhlayiya ze-potash. Ngemuva kwalokho ihlanganiswa ne-brine. Lokhu kushunqiselwa kuphonswe emathangini e-flotation futhi umoya ufakwa engxenyeni. Izinhlayiya ezihlanganisiwe ze-potash zinamathela kumabhamuza womoya futhi zikhuphukele phezulu ekukhiqizeni amabanga Asezingeni Nakhe. I-potash isuswe isikhutha, isuswe izikhumba futhi yomile. Usawoti ongathinteki uhlala, ushona phansi.
I-Crystallization - Amanani, noma uthuli lwe-potash, ayatholakala kubuthakathaka bezinto zothuli nasenqubekweni yenqubo ye-scavenger flotation. Inhlawulo zihlakazwa ku-brine evuthayo futhi ziphinde zikhuliswe ngokupholisa ngezigaba ezintathu, kukhiqizwe amakristalu amakhudlwana, amsulwa we-potash (i-White Muriate). Lezi zinhlayiya zakhiwe ngumbala futhi zomile. I-White Muriate ingahle icwengeke i-99.9 iphesenti elicwengekile le-KCL ngokuvuselela kabusha. I-RefC KCl iphezulu ebumsulwa futhi isetshenziswa embonini yamakhemikhali.
Kuyahlanganiswa - I-Graphular grade potash yenziwe ukwenziwa kwengcindezelo ephezulu yamasayizi omile namaSpecial Standard asetshenziwe abe ngamaphakethi e-potash aqhekezwe futhi amakwe usayizi.
Isinyathelo Esisodwa - Amabanga amaningi athola ukwelashwa okukhethekile ukuze azivikele ngenkathi kuhanjiswa. Uma umkhiqizo womile kakhulu, uzothambekela othulini. Uma imanzi kakhulu, izothambekele ekhekheni. Ukuvimbela uthuli noma i-caking, umkhiqizo ufafazwa ngengxube yamafutha kanye ne-amine ngaphambi kokulayisha. I-White Muriate iphathwa kuphela nge-amine; I-KCl ekhanyisiwe ayidingi ukwelashwa.
Kucashunwe kukhishwa kwe-IMC Global Press kanye nekhasi eliyisiqalo le-inthanethi le-IMC Kalium